China YANGU Magnetic Inotyairwa Pump vagadziri uye vanotengesa | damei kingmech pombi
Saizi: DN25 ~ DN300
Unyanzvi: ~ 800m3 / h
Musoro: ~ 300m
Kupisa: isingasviki 120 ℃
Pressure: 2.5 ~ 10MPa
Simba: ~ 280kW
Chinyorwa: Simbi yesimbi, simbi isina chinhu 304/316/321 / 316Ti / 904L, Duplex, Hastelloy, Titanium uye Titanium chiwanikwa zvichingodaro
1.Rong mugodhi akanyudzwa pombi
2.Maximum yakanyudzwa kudzika ndeye 7m.
3.Dangerous pombi dzemvura dzinozove dzakagadzirwa nekaviri midziyo goko, Ichave alarm apo yekutanga yekugadzika gomba rakaedzwa.
4.Iyo yekutyaira shaft inotsigirwa nekuumburuka kubereka, kutenderera kubereka ndeye mafuta lubrication; pombi mugodhi inotsigirwa ne hydraulic inotsvedza inobereka, inotsvedza inobereka inoiswa lubricum neiyi yekupomba mvura yepombi.
5.Magnetic pombi inogona kuwana izvozvo pasina kuvuza, iyo's yakakodzera kutamisa inoparadza, chepfu, zvinobata moto, putika, anodhura kana nyore gasification mvura. Uye zvakare, magnetic pombi inokodzera zvakare kuendesa yakanyanya tembiricha, yakaderera tembiricha fluid uye mvura pasi pechiyero mamiriro.
6.Iyo magineti block yemagineti pombi ndeyemhando yepamusoro isingawanzike pasi zvachose magineti zvinhu-samarium cobalt, iyo isingadzoreke demagnetization yepamusoro tembiricha inogona kusvika 400-450 ℃, yakanyatso kuvimbisa iyo yemagineti yekubatanidza neyakavimbika mashandiro. Kana ichinge ichishanda zvakajairika, magnetic coupling uye matatu-chikamu induction mota inoshanda yakaenderana uye ine yakagadzikana kuita. Chii's zvimwe, zvachose magineti ine yakanyanya kukwirira kugadzikana, uye inogona kudzivirira kukuvara panguva yegungano uye dis kuungana kwema rotor kana pombi inoshanda pane yakanyanya torque.
7.There ari zvishoma nezvishoma mumatope inobereka muna rinobva pombi, saka izvozvo's yakakodzera kushanda ichienderera. Edza kudzivirira nguva dzekutaura, kazhinji dzisingapfuure kagumi muawa. Ipapo inogona kudzikisa abrasion yekutsvedza inobereka panguva yekutanga nekumira, uye kuwedzera hupenyu hwayo hwekushanda.
Nekuda kwepamusoro tembiricha yemagineti, pane chikamu chakawedzerwa pakati pepombi uye yekubatanidza magineti, iyo yakaumba maviri akazvimirira kutenderera.
9.Panguva yekushanda, iyo magnetic pump's axial simba inozvinongedza nema hydraulic simba, dhisiki disc inongotakura iyo pakarepo axial kukanda kana pombi yatanga uye kumira.
Pashure: MZF Magnetic Dhizaina Pump
Zvadaro: MMC Magnetic Zvifambiswe Pump
MMC Magnetic Zvifambiswe Pump
MG Magineti Inotyairwa Pump